लुम्बिनीमा डलर लिएर रोपेका बोदी वृक्षको संरक्षण भएन | Mechikali Daily
लुम्बिनीमा डलर लिएर रोपेका बोदी वृक्षको संरक्षण भएन
Posted By: Mechi Kalion: १८ चैत्र २०७३, शुक्रबार ०५:०४
बुटवल, । पूर्व शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्मा हालै आफ्ना स्वर्गीय मातापिताको स्मरणमा वोधीवृक्ष (पिपलको वृक्ष) रोप्न सपरिवार लुम्बिनी पुगेका थिए । विश्व शान्तिका प्रतिक गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा आफनो पूर्वजको नाममा पिपलको वृक्ष रोप्ने र लुम्बिनी क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन आफ्नो पनि योगदान दिने उनको आकांक्षा थियो ।
आफ्ना सन्तानले यो वृक्षलाई सदा स्मरण गरिरहुन भन्ने उनको आशा थियो । आफुले रोपेको वृक्षको संरक्षण होस भनि लुम्विनी विकास कोषको नियमानुसार २ सय ५० डलर रकम समेत शर्माले बुझाएका थिए । आफुले लगाएको वृक्ष हर्लक्क बढेको देख्ने आशामा १ वर्षपछि लुम्बिनी पुग्दा वृक्ष फेरिएको मात्र थिएन्, रोपेको स्थान समेत चिन्न गाह्रो भयो शर्मालाई । ‘वृक्ष रोपेको ठाउँसम्म पुग्नै गाहो भो, बल्लबल्ल सोधेर पुगेको ठाउँमा पुग्दा त वोधी वृक्ष आफुले रोपेभन्दा अर्कै देखियो ।” शर्माले त अहिले बिरुवा नै फेरिएको आशंका गरेका छन ।
लुम्विनी विकास कोषको मुख्य कार्यालय भएको ठाउँ नजिकै रहेको १९०÷२०० वर्ग मिटर सःशुल्क वृक्षारोपण क्षेत्रका लागि कोषले गुरु योजनामा नै जग्गा छुट्याएको छ । यो ठाउँमा नेपाली २ जना सहित ८ जनाले वृक्ष रोपेका छन् । ८ वटा विरुवामध्ये अहिले ३ बिरुवा मात्र बचेका छन् । पुर्व शिक्षा मन्त्री शर्मासँगै लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव अजितमान तामाङले २०७२ साउन ४ गते सँगसँगै वृक्ष रोपेका थिए । आफैले रोपेको वृक्ष संरक्षण गर्न सदस्य सचिव तामाङ असफल देखिएका छन् ।
तामाङ र शर्मा भन्दा अगाडि सन् २०११ जुलाई ७ मा अमेरिकाका मार्सिया माब्सले र डन माईलाइन्स, सन् २०१२ जुलाई १२ मा कोरियाका डाक्टर क्याक योङ हुन, २०१२ जुलाई १८ मा भियतनामका डाक्टर लाम टिक्युउ, जापानका टोकुसिन कासाई र २०१३ नोभेम्वर ५ मा थाईल्याण्डका रोसेसावान पे्रभालेकले वृक्ष रोपेका थिए । २ सय ५० डलर संरक्षणका लागि बुझेर पनि कोषले बिरुवा संरक्षणमा हेलचक्रार्इं गरेको स्पष्ट देखिएको छ ।
त्यसो त, लुम्बिनीमा बर्षौदेखि वृक्षारोपण गर्ने गरिएकै हो । यहाँ विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिहरुले शान्तिको कामना गर्दै वृक्षारोपण गर्ने गर्छन । भीभीआईपीदेखि सर्वसाधारणका लागि समेत वृक्षारोपण स्थल बनाएको छ लुम्विनी विकास कोषले । मायादेवी मन्दिर नजिकै आम सर्वसाधारण लगायत सबैले वृक्षारोपण गर्न पाउँछन् । तर, लुम्बिनी विकास कोषले यस्तो स्थान पनि बनाएको छ, जहाँ निश्चित शुल्क तिरेर मात्र वृक्षारोपण गर्न पाईन्छ । यहाँ रोपिने सबै बिरुवाको संरक्षणको जिम्मा विकास कोषको रहेको हुन्छ । विकास कोषको दायित्व विरुवाको संरक्षण मात्र हुंदैन, विरुवा हुर्किसकेपछि कसले रोपेको हो भनेर प्रचार गरिदिने दायित्व समेत बोकेको हुन्छ । यसरी संरक्षणका लागि यौटा वृक्ष लगाउन २ सय ५० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कोषले गरेको छ ।
लुम्विनी विकास कोषमा ३६५ दिनमा मुस्किलले ६० दिन मात्र काम हुने गरेको छ । बर्षभरी हुने कर्मचारी आन्दोलनले विकास कोषको काम प्रभावित भएको छ । अझ, विकास कोषका सदस्य सचिवदेखि अन्य वरिष्ठ हाकिमहरु काममा खट्नु भन्दा बाहिर बस्न चाहने प्रवृतिले गर्दा कोष लथालिंग भएको छ । नियुक्ती पाएदेखि नै हाकिमहरु काठमाडौं बस्ने गरेकाले लुम्विनीमा काम हुन नसकेको कर्मचारीहरुले आरोप लगाउँछन् । हाकिम जति काठमाडौमा, कर्मचारी सबै आन्दोलनमा कसरी हुन्छ विकास र वृक्षको संरक्षण, वर्षौदेखि काम गर्दै आएका मालि रवी काहार भन्छन् ।
लुम्विनी विकास कोषले गुरुयोजना नै बनाएर ३८ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल जमिन विश्वभरबाट आएका विशिष्ट व्यक्तिहरुबाट वृक्षारोपण गराउने विशेष व्यवस्था मिलाएको छ । शान्तिको कामना गर्दै विश्वभरबाट आएका बौद्धमार्गीहरुले यो स्थानमा सयौ विरुवा समेत लगाएका छन् । तर, तारबार नहुँदा, आगलागी नियन्त्रण गर्न नसक्दा र बिरुवालाई आवश्यक मल, सिंचाईको व्यवस्था गर्न नसक्दा बिरुवाहरु मर्ने गरेको अर्का माली निसार अहमत शेखको भनाइ छ । स्वच्छ शान्त र हराभरा बातावरण बनाउन रोपिएका बिरुवा दिनदिनै मर्न थाले । संरक्षणको अभावमा ठाउँ पनि मरुभुमिजस्तै बन्यो शेष थप्छन् ।
लुम्बिनी विकास कोषमा तलब र भत्ता खाईरहेका कर्मचारीमा मात्र होईन नेतृत्व प्रतिको असन्तुष्टी सुरक्षा क्षेत्रमा खटिएका गार्डमा पनि देख्न सकिन्छ । पैसा लियो कर्मचारी खटाएन, नियुक्ती लियो, काठमाडांै बस्यो अनि बिरुवा मर्दैन त ? सदस्य सचिव अजितमान तामाङप्रति संकेत गर्दै सुरक्षा गार्ड रविन्द्रनाथ शुक्ला प्रश्न गर्छन् । “बच्चा जन्माएपछि त स्याहार सुसार पनि गर्नुपर्छ नि बिरुवा मरेपछिको शुक्लाको चिन्ता हो यो ।
संसार भरीका शान्ति प्रेमी जनताको आस्थाको केन्द्र बिन्दु बनेको लुम्बिनी राजनीतिक नियुक्तिका कारण सधैं विवादित हुने गरेको छ । सरकारमा दल फेरिएसँगै कोषका पदाधिकारी फेरिने परिपाटी र उनीहरुमा रहेको गैरजिम्मेवार प्रवृतिका कारण अन्तरर्राष्ट्रिय महत्व राख्ने लुम्बिनीप्रति नै आस्थावानहरुको बिश्वास त डगमगाउने होईन ? भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
कोषले गरेको लापरवाहीको नेतृत्वलाई जानकारी नै नभएको भने होईन । कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोध सशुल्क वृक्षारोपणको संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको सजिलै स्वीकार गर्छन् । पर्यटन प्रवद्र्धन उपसमिति बनाएका छौं, अवका दिनमा दाताको गुनासो आउंँदैन कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु निग्रोध बताउँछन् । कोषले २ महिना अघि कोषका सदस्यको संयोजकत्वमा पर्यटन प्रवद्र्धन समिती गठन गरेको थियो । तर यो समिति पनि त्यति सक्रिय भएको देखिदैन । लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटन प्रबद्र्धन र प्रचार प्रशारका लागि बिगत १० वर्ष पहिलेदेखि वृक्ष लगाउने कार्यक्रम राखेको थियो ।